Tacadiyo ka dhan ah Haweenka oo Muqdisho ka dhacay labadii Todobaad ee tagtay – SOMA: Somali Media Association
Tacadiyada loo geysanaayo dumarka ayaa noqotay, mid badanaa ka dhaca Soomaaliya, iyadoo labadii Todobaad ee lasoo dhaafay Muqdisho laga diiwaan galiyey laba dhacdo oo aad u xanuun badnaa.
Salaado Faarax Cali oo ahayd ayaa Afartii bishaan waxaa xilli habeen ah dilay, Seygeeda oo in mudo ah uu ka dhex jiray khilaaf arrimo qoys ah. Bashiir Cabdi Xasan oo ah Eedeysanaha dhibta geystay ayaa u isticmaalay dilka Gabadha Bir uu madaxa kaga garaacay.
Maxamed Faarax Cali oo ah Walaalka Marxuumad Salaado ayaa sheegaya in walaashiis ay in muddo ah u joogtay Guriga reerkeeda, Caro darteed, kaddib markii ay ninka qabay ka codsatay in ay kala tagaan, balse uu diiday ninka soo jeedinta Salaado.
Waxa uu sheegayaa in qoysaska labada dhinac ay wadeen sidii lagu xallinta Arrinta Salaado & Bashiir, balse ay kasoo hormartay dhacdadaan argagaxa leh. Waxa uu tilmaamay Maxamed in walaashiis & Seygeed ay wada joogeen sanado, balse aysan waxba isku dhalin.
“Ama ayadaa dhimaneyso ama anaa dhimanaayo qof kale ma calfanaayo uu horey u dhahay , waxaa dhacday in la shirqoolay markii la shirqoolay ilmihiiyey salaantay ilmihii guriga joogay markey salaantay gurigay gashay waxii lagu samayn karay waa lagu sameeye, ninka wuu Soo baxay maamada guriga daganeed way maqneed markay imaatay ilmihii waxay dhaheen hooyo habaryar qaylineysay maamada guriga ma galin poliskay uwacday , booliska iyo abaayo guriga furay kadib gabadha dhulka taalo nafyar ku jirtay isbitaal Lola cararay isbitaalka ku dhimatay”.
Bashiir Cabdi ayaa horay u ahaa Macallinka Salaado, kahor guurkooda, xilligii Iskuulka ay dhiganeysay, balse falka dhacay ayaa si weyn cabsi xooggan ugu beertay bulshada caasimada, gaar ahaan Xaafadda Hantiwadaag, ee Degmada Warta-Nabadda, ee Muqdisho oo uu falka ka dhacay.
Faadumo Saciid Axmed oo ah habaryarta Salaado ayaa sheegeysa in ay aad uga naxeen marka ay maqleen dhibta dhacay, oo aysan maleysaneynin marna.
Waxa ay SOMA u sheegtay in haddii arrintaan la fududeysto, ay dhici karto in Rag badan ay ku dhiiradaan in ay sameeyaan arrintaan oo kale, iyada oo dalbatay in ay si adag u shaqeyso Cadaaladda.
“Guryaheena waan ku jiri lanahay qofti pariga saan layeelay oo walaashaa eh oo gabar habarir utahay bari ma moogid in adi lagu yeelaayo war waxaan halaga kacdoomo halaga wada hadlo sharciga islaamka maqabo kii wax geesanaayo halakeeno tiirka ilaahay subxaanahuu watacaalaa wuxuu yiri qofkii qof disho waa in ladilaa halaga gooyo qof qof disho hadii ladili lahaa qof qof disho ma aan larki laheen.”
Haweenka qaar ayaa la kulmay sida la sheegay Kufsi, halka kuwa kalana ay u geeriyoodeen dhibaato loo geystay, waxaana ay arrintaan walwal hor leh ku beertay dumar badan.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba, in dhibaatada ugu weyn ee aysan Haweenka Cadaaladda u helin marka ay dhibta la kulmaan ay tahay Odayaasha dhaqanka, oo ka daba yimaada Wiilka.
Anas Xaashi Maxamed oo dalka dibadiisa wax kusoo bartay ayaa aaminsan in tacadiyada dumarka loo geysta looga gudbi karo kaliya in dowladda ay sameyso sharciyo adag oo aan la jabin, iyo in loo sameeyo wacigalin xoog leh, taa oo kor loogu qaadayo wacyiga bulshada ay ka qabaan gabood falka dumarka oo ah arrin aan dhaqan iyo diinba ay u ogoleyn.
“Samafale tacadiyada dumarka iyo dhiwatoyin kale oo farabadan fgmka iyo wax yabaha nocaas ay kamid yihiin oo dumarka lagula kaco ayaa jiro een run ahaan tii waxaan amin sanahay arintaas in laga gudbi karo in lahelo wacyi bul sheed oo bulshada dhan laga wacyi galinayo waxani wax hagaag san aheen lonashego ilaa kuwa mii iyo magalo joogo laga wacyi galiyo arin taan een doladuna markaas ay sodajiso sharci lagu hagikaro arin taan ama looga hor tagikaro gawi ahaan ba wax yabaha tac diyada ah ee dumarka kudhaca ee mar kasi lagulakaco marki lajoogo bulshada soomaalida dhaxdeeda sidookale wax yabo badan ayaa kena in maal mo kabacdi wixii inta lahadal haayo ama gawar lakuf sado ama gawar lakuf sado oo dil loogudaro oo kale in maal mo kabacdi arin taasi markii soshiyaal midiya iyo bulshada is ladhax qaado maal mo kabacdi arintii hal kedii lagu soo gawagaweeyo ayna jirin cid arin taasi dawakacdo.”
Afhayeenka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay Lixdii bishaan in ay Ciidamada Booliska ay gacanta kusoo dhigeen, Macallin Bashiir oo ah Eedeysanaha loo haysto dilka Xaaskiisa Salaado.
Sidoo kale Laanta Dambi baarista ee Booliska ayaa ganacta ku haaya baaritaan fal lagula kacay, Nafisa Cumarr oo ahayd 12, taa oo inta gacmaha la isaga xiray lagu dhex riday, digsi lagu kariyo Cuntada.
WQ:- Fartuun Aamusane oo ka tirsan Star Fm Muqdisho
Arday arag Naafo ka ah oo markii ugu horreysa u fariistay imtixaanka Dowladda ee dugsiga dhexe